Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Mametraka ny fijeriny amin'ny fizahantany gastronomy izao i Jamaika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Fizahan-tany any Jamaika
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Nilaza i Edmund Bartlett fa hanangana lalantsara fizahan-tany momba ny fizahantany any amin'ny faritra voafantina ao Kingston ny ministerany mba hampiasana ny tolotra fizahan-tany ara-tsakafo ao Jamaika ary hanamafisana ny toeran'i Kingston ho toerana fizahan-tany voalohany.
Nanao fanambarana i Bartlett nandritra ny fanokafana lakozia Sakafo sy zava-pisotro any Jamaika tao amin'ny Progressive Plaza, eo amoron'ny Barbican Road, Kingston.
“Te-hametraka Corridors Tourisme Gastronomie izahay. Nijery ny lalantsara izahay manomboka amin'ny Half Way Tree mankany Papine. Efa manana trano fisakafoanana maherin'ny zato izahay manamorona an'io lalantsara io, ary eo afovoan'izany rehetra izany no misy ny Gastronomy Center of Kingston, Devon House. Koa hiara-hiasa amin’ny fananganana io hetsika io isika. Ny Tambajotra Linkages, tarihin'i Carolyn McDonald-Riley, dia hijery ny fomba ahafahantsika manatanteraka izany, ”hoy ny minisitra Bartlett.
Nanampy ny Minisitra fa ho ao anatin'io lalantsara io ihany koa ny New Kingston, izay manana toeram-pisakafoanana, trano fisakafoanana ary hotely maromaro, indrindra eo amin'ny Knutsford Boulevard.
“Tsy afaka misoroka ny New Kingston isika amin'ireo fifanakalozan-kevitra ireo. Knutsford Boulevard dia maneho ny tenany amin'io lafiny io, ary tsy azo lavina izany. Noho izany, tsy maintsy mijery ny lalantsara isika amin'io lafiny io, fa amin'ny fomba mitovy, manana lalantsara iray hafa isika. ao Jamaika. Toy izany koa, afaka mijery lalantsara fizahan-tany gastronomie mihoatra ny iray ao Kingston isika », hoy ny fanazavan’ny minisitra.
Ny lalantsara fizahan-tany momba ny gastronomie avy ao Knutsford Boulevard dia hitohy amin'ny lalana Trafalgar, mankany amin'ny Devon House, avy eo mankany amin'ny Lady Musgrave Road mba hamehezana ireo hotely sy trano fisakafoanana ao amin'io faritra io.
"Hahazo antoka izahay fa i Kingston dia haka ny toerany amin'ny maha-tanànan'ny fizahantany mega - miaraka amin'ny sakafo, fialamboly, fanatanjahan-tena ary fahalalana ho ivon'ny antsony," hoy i Bartlett.
The Jamaika Food and Drink Kitchen no hetsika ara-tsakafo vaovao indrindra ao Jamaika. Izy io no voalohany amin'ny karazany eto amin'ny nosy ary mirehareha ny tsena gourmet, kaontera mixology, lakozia studio feno fitaovana ary efitrano fialamboly. Ho fonenan'ny Fetiben'ny Sakafo sy zava-pisotro isan-taona any Jamaika miaraka amin'ny fandaharana amin'ity taona ity – JFDF2021 'In D'Kitchen' - manolotra hetsika ara-tsakafo 24 mandritra ny 12 andro.